(1) သင်သည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှယ်ယာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု ပေါင်းစပ်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ CHUANGRONG သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် စက်ရုံ ၅ ရုံ၏ သွင်းကုန်နှင့် တင်ပို့မှုကို တာဝန်ယူကာ ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုလည်း ရောင်းချပါသည်။
(၂) မင်းရဲ့ ကုမ္ပဏီကို ဘယ်တုန်းက တည်ထောင်ခဲ့တာလဲ။
CHUANGRONG ကို 2005 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
(၃) မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက ဘယ်မှာလဲ။
CHUANGRONG သည် ပန်ဒါများ၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည့် Chengdu တွင် တည်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများသည် Deyang၊ Sichuan၊ China တွင် ရုံးချုပ်ရှိသည်။
(4) မင်းရဲ့စက်ရုံကို သွားကြည့်လို့ရလား။
2.R & D & ဒီဇိုင်း
(၁) မင်းရဲ့ R&D စွမ်းရည်က ဘယ်လိုလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D ဌာနတွင် ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း 10 ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ4ဦးသည် စိတ်ကြိုက်လေလံဆွဲသည့်ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း3ခုနှင့် R&D ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထူထောင်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်လျောညီထွေရှိသော R&D ယန္တရားနှင့် အလွန်အစွမ်းထက်သော ခွန်အားသည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
(၂) စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကြားက ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးနှင့် ကွဲပြားသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတရားကို လိုက်နာကြပြီး မတူညီသော ထုတ်ကုန်ဝိသေသများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
(3) သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများသည် အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများတွင် အသွင်အပြင်၊ ချိုးချိန်တွင် ရှည်ထွက်ခြင်း၊ Oxidation induction time၊ Hydrostatic strength စမ်းသပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။အထက်ဖော်ပြပါ ညွှန်းကိန်းများကို WRAS၊ SGS သို့မဟုတ် ဖောက်သည်က သတ်မှတ်ထားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။
(4) ကျွန်ုပ်၏ ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။OEM သို့မဟုတ် ODM မော်ဒယ်များ?
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ဒီဇိုင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။OEM နှင့် ODM မော်ဒယ်များကို အမြဲကြိုဆိုပါသည်။
(၁) ဘယ်လို အောင်လက်မှတ်တွေ ရှိလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် IS09001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ CE၊ SGS၊ WRAS ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရယူထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူရေးစနစ်သည် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရောင်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် “မှန်ကန်သောအရည်အသွေး” ကို “မှန်ကန်သောပေးသွင်းသူ” မှ “မှန်ကန်သောပမာဏ” ဖြင့် “မှန်ကန်သောအချိန်” ဖြင့် “မှန်ကန်သောစျေးနှုန်း” ဖြင့် “မှန်ကန်သောအရည်အသွေး” ကိုသေချာစေရန် 5R နိယာမကို လက်ခံပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပန်းတိုင်များအောင်မြင်ရန် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းသည်- ပေးသွင်းသူများနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၊ ထောက်ပံ့မှုကို သေချာထိန်းသိမ်းရန်၊ ဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ဝယ်ယူရေးအရည်အသွေးကို သေချာစေရန်။
(၂) မင်းရဲ့ ပေးသွင်းသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။
လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Borouge၊ Sabic၊ Basell၊ Sinopec၊ Petrochina၊ Battenfield၊ Haitian၊ Ritmo၊ Leister စသည်တို့အပါအဝင် လုပ်ငန်း ၂၈ ခုနှင့် ၃ နှစ်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၃) ပေးသွင်းသူများ၏ စံနှုန်းကား အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးသွင်းသူများ၏ အရည်အသွေး၊ အတိုင်းအတာနှင့် ဂုဏ်သတင်းကို အလွန်အလေးထားပါသည်။ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးသည် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာယုံကြည်ပါသည်။
(၁) မင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်က ဘာလဲ။
aထုတ်လုပ်ရေးဌာနသည် ပထမအကြိမ်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုအမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကို ချိန်ညှိပါသည်။
ခပစ္စည်းကိုင်တွယ်သူသည် ပစ္စည်းများရယူရန် ဂိုဒေါင်သို့သွားပါသည်။
ဂ။သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ကိရိယာများကို ပြင်ဆင်ပါ။
ငအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်ပါကထုပ်ပိုးမှုစတင်လိမ့်မည်။
fထုပ်ပိုးပြီးနောက်၊ ထုတ်ကုန်သည် ကုန်ချောဂိုဒေါင်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
(၂) သင့်ပုံမှန် ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့မှုကာလ ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
နမူနာများအတွက်၊ ပေးပို့ချိန်သည် အလုပ်လုပ်ရက်5အတွင်းဖြစ်သည်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်၊ အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက် 7-15 ရက်အတွင်း ပေးပို့ချိန်ဖြစ်သည်။① သင့်အပ်ငွေကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပြီးနောက် ပေးပို့ချိန်သည် ထိရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ② သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် သင်၏နောက်ဆုံးခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးပို့ချိန်သည် သင်၏သတ်မှတ်ရက်နှင့် မကိုက်ညီပါက၊ သင့်အရောင်းတွင် သင့်လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ကိစ္စတိုင်းတွင်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမည်။ကိစ္စအများစုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
(3) သင့်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ MOQ ရှိပါသလား။ဟုတ်ရင် အနည်းဆုံး ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
OEM/ODM နှင့် စတော့အတွက် MOQ သည် အခြေခံအချက်အလက်တွင် ပြထားသည်။ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏
(၄) မင်းရဲ့ စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်က ဘယ်လောက်လဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်အဆင့်မြင့်သောပိုက်လိုင်းများထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 100 ကျော်၊ သင့်လျော်သောထုတ်လုပ်မှုကိရိယာအစုံ 200 ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏသည် တန်ချိန် 100,000 ကျော်ရှိသည်။၎င်း၏ပင်မတွင် ရေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သောင်တူးခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်စနစ် ၆ ခု၊ စီးရီး 20 ကျော်နှင့် သတ်မှတ်ချက်ပေါင်း 7000 ကျော် ပါဝင်ပါသည်။
6. ထုတ်ကုန် & နမူနာ
(1) HDPE ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် စံနှုန်းများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန်များသည် ISO4427/4437၊ ASTMD3035၊ EN12201/1555၊ DIN8074၊ AS/NIS4130 စံနှုန်းနှင့်အညီ ISO9001-2015၊ CE, BV, SGS, WRAS မှ အတည်ပြုထားသည်။
(2) HDPE ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံအချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
100% မူရင်းကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် HDPE ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်၊ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် နှစ် 50 အာမခံပေးနိုင်ပါသည်။
(၃) ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။
a.HDPE ပိုက်သည် ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ သောင်တူးခြင်း၊ သတ္တုတွင်း၊ ဆည်မြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်အတွက် ဖြစ်သည်။
b.Socket၊ Butt-fusion၊ Electro-fusion၊ Syphon အတွက် HDPE ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
c.PP compression fittings များ။
d.PPR ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
e.PVC ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
f. Socket၊ Butt-fusion၊ Electro-fusion အတွက် ပလပ်စတစ်ဂဟေစက်။
g. ပလပ်စတစ်ထုတ်ဖောက်သေနတ်နှင့် အပူရှိန်လေသေနတ်။
(4) အော်ဒါမစမီ နမူနာများ ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ များသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက်နှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနမူနာများကို အခမဲ့ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခကို ကာမိရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၁) သင့်တွင် မည်သည့်စမ်းသပ်ကိရိယာများ ရှိသနည်း။
ကုမ္ပဏီတွင် အဆင့်မြင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပြီး အမျိုးသားအဆင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခု ရှိသည်။ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အရည်ပျော်နှုန်းစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်ပျံ့နှံ့မှုစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ Ash ပါဝင်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ Density gradiometer နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်စမ်းသပ်စက် အစရှိသည်တို့ ပါရှိသည်။ပြည်နယ်နည်းပညာစင်တာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအတွက်စမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။
(၂) သင်၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကုန်ကြမ်းနှင့် ကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များရှိသည်။
(၃) သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ ခြေရာခံနိုင်မှုအား မည်သို့နည်း။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ခြေရာခံနိုင်စေရန် သေချာစေရန် ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲနှင့် အသုတ်နံပါတ်ဖြင့် ပေးသွင်းသူ၊ အစုလိုက်အစည်းလိုက်ဝန်ထမ်းများနှင့် QC အဖွဲ့ထံ ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်သည်။
(၄) သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ပေးဆောင်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် လက်မှုပညာကို အာမခံပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိပြုချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို သင့်အား စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။အာမခံရှိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်မှာ သုံးစွဲသူပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် လူတိုင်းကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်။
(၁) ထုတ်ကုန်များကို လုံခြုံစိတ်ချရသော ပို့ဆောင်မှုအာမခံချက်ရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို့ဆောင်မှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ထုပ်ပိုးမှုကို အမြဲအသုံးပြုသည်၊ အထူးပြုထုပ်ပိုးမှုနှင့် စံမဟုတ်သော ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်များသည် အပိုကုန်ကျစရိတ်များ ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။
(၂) ပို့ဆောင်ခက ဘယ်လိုလဲ။
ပို့ဆောင်ခသည် ကုန်ပစ္စည်းရယူရန် သင်ရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။Express သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလျင်မြန်ဆုံးသာမက စျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းသည် ပမာဏကြီးကြီးမားမားအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ပမာဏ၊ အလေးချိန်နှင့် နည်းလမ်းအသေးစိတ်သိမှသာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများကို အတိအကျပေးနိုင်ပါသည်။
(၃) မင်းရဲ့ loading port ဘယ်မှာလဲ။
များသောအားဖြင့် Ningbo, Shanghai, Dalian, Qingdao
(၁) သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် လက်ခံနိုင်သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှာ အဘယ်နည်း။
a30% T/T အပ်ငွေ၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ 70% T/T လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု။
ခမြင်ကွင်းတွင် L/C လက်ခံနိုင်သည် ။
ဂ။Ali ကုန်သွယ်မှုအာမခံ၊ Paypal၊ Western Union၊ MoneyGram။
10. စျေးကွက် & အမှတ်တံဆိပ်
(၁) မင်းရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေအတွက် ဘယ်စျေးကွက်က သင့်တော်လဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအတွက်မဆို အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။၎င်းသည် ဆွေမျိုးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားသည်။
(၂) သင့်ကုမ္ပဏီတွင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် "CHUANGRONG" အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။
(၁) သင့်တွင် မည်သည့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ ရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများမှာ Tel၊ Email၊ Whatsapp၊ Messenger၊ Skype၊ LinkedIn၊ WeChat နှင့် QQ တို့ ပါဝင်သည်။
(၂) သင့်တိုင်ကြားချက် ဟော့လိုင်းနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာက ဘာလဲ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မကျေနပ်မှုများရှိပါက Tel: +86 28 84319855 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် သင့်မေးခွန်းကို chuangrong@cdchuangrong.com သို့ ပေးပို့ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏သည်းခံမှုနှင့် ယုံကြည်မှုအတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။